Flirtymania - एक वेबक्याम प्रसारक बन्ने
एक Flirtymania वेबक्याम प्रसारक बन्नुहोस्
$ 500 प्रति हप्ता बाट कमाउनुहोस्। कुनै पनि समय, जहाँ पनि
तपाईंको प्रसारण सुरू गर्नुहोस्
फ्लर्टिमेनिया एक स्वतन्त्र वेबक्याम प्रोजेक्ट हो। प्रसारकहरूले सबै भुक्तानी प्राप्त गर्दछ, कुनै एजेन्सी वा मध्यस्थ आवश्यक पर्दैन।
कुनै सीवी वा साक्षात्कारहरू - तपाईले आफ्नो आयलाई आफैले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। एप्स सबै लोकप्रिय प्लेटफर्महरूमा मोबाइल भाषाहरू मा 17 भाषाहरूमा उपलब्ध छ, मोबाइल सहित। आईओएस, एन्ड्रोइड वा तपाईंको ल्यापटप मार्फत स्ट्रिम गर्नुहोस्। दर्शकहरुको लागि असहयोग आवश्यक छैन।
प्रति हप्ता सफल प्रसारकको आम्दानी
पैसा कमाउनुहोस् अनलाइन
तपाईंले पहिलो पटक स्ट्रिमिङ सुरु गर्दै पैसा कमाउनु भयो। तपाईंको दर्शकहरू अधिक सक्रिय, तपाईंको अन्तिम आय उच्च।
च्याट कुराकानी गर्नुहोस्
दर्शकहरूले प्रत्येक सन्देशको लागि भुक्तानी गर्छन्, त्यसैले तपाईंले प्रत्येक टिप्पणीको लागि सिक्का प्राप्त गर्नुहुन्छ।
निजी कल प्रत्येक मिनेट अधिक पैसा छ।
धन्यवादको लागि, दर्शकहरूले 1 क्लिकमा तपाईंलाई सिक्का पठाउन सक्दछन्।
तपाईंले प्रदर्शन गर्न तयार हुनुभएका कार्यहरू छनौट गर्नुहोस् र दर्शकले तपाईंलाई देख्नको लागी सिक्काहरू पठाउनेछ।
तपाईंको प्रोफाइल निष्क्रिय आयको स्रोत हो। तस्विरहरू र भिडियोहरू पोस्ट गर्नुहोस्, रसदार विवरणहरू थप्नुहोस् र हेराईहरू जम्मा गर्नुहोस्।
फोटोहरू र भिडियोहरू
प्रयोगकर्ताले तपाईंको फोटो वा भिडियोको प्रत्येक दृश्यको लागि भुक्तान गर्दछ; प्रत्येक views० विचारहरू Flirtymania सेवा द्वारा भुक्तान गरिन्छ।
फ्लाइटम्यानिया लिङ्क सामाजिक जालहरूमा लिङ्क गर्नुहोस्, यसलाई तपाइँको वेबसाइटमा पोस्ट गर्नुहोस् वा व्यक्तिगत रूपमा तपाईका साथीहरूलाई पठाउनुहोस्। यस तरिकाले तपाईंलाई संलग्न दर्शकहरूको खरिदबाट रुचि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईंको स्ट्रिमको लागि थिम छनौट गर्नुहोस्
फ्लोटीम्यानियाले उनीहरूको निर्माणमा सक्रिय कामको लागि धन्यवाद दिन्छ। क्यामेराको अगाडि के गर्नुमा चिन्ता नगर्नुहोस्! एउटा विषय छनौट गर्नुहोस् र तपाईका सिक्काहरू प्रदर्शन गर्न तयार हुनुहुन्छ। ड्रेस कोडको अनुसार एक संगठन सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंका प्रशंसकहरूसँग कुराकानी गर्न पैसा कमाउनुहोस्। दर्शकहरूले तपाईंको शोलाई निर्देशन दिन्छन्।
नियमित कसरत गर्न कुनै समय छैन? योग वा पायलट गर्दा सिक्का कमाई गर्ने प्रयास गर्नुहोस्!
तपाईंको रोजगारीको जीवनलाई अनावरण गर्नुहोस्, तर तपाईंको फ्यानहरूलाई मनोरञ्जन गर्न मनपर्छ बनाउनुहोस् - तपाईंको दर्शकहरूले अनुरोध गर्ने कार्यहरू गर्नुहोस्!
राम्रो दाँत पाउनुभयो? केकहरू र कुकीहरूसँग आफूलाई उपचार गरेर सिक्का कमाउनुहोस्! दर्शकहरू देखाउँछन् कि तपाईं कत्तिको माया गर्नुहुन्छ?
सजिलो कुराकानी गर्नुहोस्
फ्लाटिमानियामा स्ट्रीम दुई क्लिकहरूमा सुरु गर्न सकिन्छ। प्रयास गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि कति सजिलो छ!
विदेशी भाषामा तपाईंको मूल भाषामा लेख्नुहोस् र अन्त-निर्मित स्वत: अनुवादकले बाहिरिनेछ।
वेबक्याम सेवाहरू संयोजन गर्दै
एकै समयमा धेरै साइटहरू र उपकरणहरूमा काम र कमाउनुहोस्। यो पूर्णतया सुरक्षित छ।
तपाईं प्रत्येक 000००० सिक्का $ १ को लागि साटासाट गर्न सक्नुहुनेछ। न्यूनतम फिर्ता रकम १० डलर हो।
केवल ePayments मा साइन अप गर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नै बिटकेइन वा Yandex.Wallet बनाउनुहोस् र तपाइँलाई चाहानु भएको कुनै पनि पटक भुक्तानी अनुरोध गर्नुहोस्। तपाईं पनि दैनिक फर्काउन सक्नुहुन्छ।
चार्जब्याक बिना भुक्तानी गर्दै। आयको 100% प्राप्त गर्नुहोस्, फ्लाइटम्यानियाले रकम फिर्ता लिन्छ।
सुरक्षित र बेनामी
गुनामी धेरै केटीहरु को लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। Flirtymania संग तपाईं गुमनामता स्तर चयन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ संग धेरै सहज हुनुहुन्छ। केवल निश्चित सेटिङहरू ब्ल्याकलिस्ट र विशेष देशहरू ब्लक गर्न गोपनीयता सेटिङहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको भित्तामा परिष्करण छान्नुहोस् थप्नुहोस् - असामान्य उपनाम छान्नुहोस् (तपाईंको पहिचान लुकाउने छ) र एकदम सुन्दर स्टाइलिश मास्क।
यो सजिलो छैन विश्वास गर्न सक्दैन?
यसलाई जाँच गर्नुहोस् र आज कमाई सुरु गर्नुहोस्!
म कसरी वेबक्याम प्रसारकको रूपमा साइन अप गर्न सक्छु?
तपाईंलाई काम सुरु गर्न विशेष खाताको आवश्यकता छैन। केवल अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र प्रसारण सुरू गर्नुहोस्। केवल 18 बर्ष महिलाहरु र माथि भिडियो च्याटहरूमा काम गर्न सक्षम छन्। कृपया आफ्नो उमेर उचित पहिचानको साथ साबित गर्न तयार हुनुहोस्।
के म एक पेशेवर वेबक्याम प्रसारक हुनु पर्छ?
हाम्रा दर्शकहरू सबै सजिलो र राम्रा केटीहरू भेट्न खुसी हुन्छन्। तपाईंले भिडियो च्याटमा काम गर्न पेशेवर उपकरणहरू आवश्यक छैन।
के नग्नको लागी आवश्यक छ?
पक्कै होइन! हाम्रो साइटले दर्शकहरूलाई उमेर 12 र माथि सम्म अनुमति दिन्छ ताकि कामुक प्रसारणहरूलाई अनुमति छैन।
पूरा FAQ पढ्नुहोस्पूरा FAQ पढ्नुहोस्